My Thoughts My Blog: February 2009
ရေးသားသူ phoe thu taw at 1:15 AM
ကျွန်တော် Windowe Live Writer နဲ့ စမ်းသပ်ရေးသားပြီး ပို့စ်တင်ကြည့်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဆင်ပြေပါက ဆက်လက်သုံးစွဲသွားဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါသည်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ရေးသားသူ phoe thu taw at 3:39 AM
I’m now using window live writer and just testing from this.
ရေးသားသူ phoe thu taw at 3:31 AM
လေယာဉ်ပြေးလမ်း၊ လေယာဉ်လျှောက်လမ်းတို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသုံးပြုတဲ့ မီးလုံးမီးတိုင်ပေါင်း မြောက်မြားစွာရှိပါသည်။ ယခုအသစ်တိုးချဲ့ပြီးစီးသော လေယာဉ်ပြေးလမ်းအတွက် လေယာဉ်ပြေးလမ်းချဉ်းကပ် မီးနဲ့ အချက်ပြမီးတိုင်များတပ်ဆင်ထားပုံကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ တကယ်တော့ ပုံလေးတွေက ကြည့်ရတာ လှလို့ပါ . J
ဒီပုံက ကြော်ငြာဝင်တာ :P
သူတော် ( ၁၇.၂.၀၉)
ရေးသားသူ phoe thu taw at 7:45 PM